6 ka mid ah Podcast-yada SEO ugu Wanaagsan ee ay tahay inaad Dhageysato | BehMaster
Bogga ugu weyn/Content Suuq/6 ka mid ah Podcast-yada SEO ee ugu Wanaagsan ee ay tahay inaad Dhageysato
6 ka mid ah Podcast-yada SEO ee ugu Wanaagsan ee ay tahay inaad Dhageysato
Haddii aad ku cusub tahay podcasts, dunidu waa isku beddeshaa isla indhahaaga hortooda.
Marka loo eego sahan iyo tirokoob ay dhawaan sameeyeen warbaahinta podcast-ka, oo ay ku jiraan Spotify, Google (YouTube), iTunes, iyo Stitcher, waxa lagu qiyaasaa in 155 milyan oo qof oo Maraykanka ku nool ay arkeen podcast.
Kanada, 36% dadka dalka deggan ayaa daawaday ama dhegaystay muuqaal la duubay bishii la soo dhaafay, halka 30% dadka deggan Australia ay sidaas oo kale sameeyeen.
Markaa, way caddahay in ay tahay qaab qoraal ah oo aad u wanaagsan si dadka loogu wargeliyo.
Iyo haddii aad tahay ganacsade si toos ah ula shaqeeya Raadinta Mashiinka Raadinta (SEO), waxaad dhageysan kartaa sawirada SEO-ga ugu fiican si aad u horumariso ciyaartaada.
Waa kan liiskayaga tusaalayaasha ugu sarreeya ee aan ka fikiri karno.
Laakiin marka hore: Waa maxay sababta Podcasts ay caan u yihiin
Ma barbar dhigi karno podcasts iyo heesaha raadiyaha, laakiin dhexdhexaadiyuhu waa la mid.
Uma baahnid inaad daawato podcast Dhegeysiga kaliya wuxuu noqon karaa qaab wax-dhis leh, oo firfircoon oo wax-barasho ah. podcasts-yadu waa kuwo madadaalo leh oo ku habboon hawl-qabadyo badan.
Iyadoo ku dhawaad ​​kala badh dhammaan fiidiyowyada suuqgeyntu ay socdaan wax ka yar lixdan ilbiriqsi, celceliska podcast-ku waa 42 daqiiqo.
Waxaad daawan kartaa qayb ka mid ah bandhigga, waxaad dhageysan kartaa intaad ku jirto taraafikada, samayn kartaa shaqooyinka bannaanka, ama waxaad nadiifin kartaa guriga. Kor u kaca weyn ee iibka taleefoonnada dhegaha la gashado iyo dhegaha-dhegaha ma ahayn kuwo si gaar ah u huriyay dhegeystayaasha muusiga.
Markaad la macaamilayso mawduuc ganacsi oo is-beddelaya sida SEO, podcasts waxay keenaysaa dabacsanaan iyo miisaan aan erayada bogga mar walba gudbin karin.
Oo, maadaama mawduucu ballaadhan yahay, dhegaysigu wuxuu kobcin karaa aqoontaada oo aan kula socodsiino isbeddellada muuqda ee warshadaha.
Haddaba, waa kuwee warfidiyeenada bixiya sawirada ugu wanaagsan ee SEO? Dhawr, oo halkan waa liiskeena dhammaystiran - si gaar ah uma kala horreeyaan.
#1. Cidhifka Shabkada
Waxaa martigeliyay Erin Sparks - oo laga heli karo Apple Podcasts, Stitcher, iyo YouTube.
La soo saaro toddobaadle, Cidhifka shabakadda diiradda saara SEO iyo Suuqgeynta Dijital ah oo leh barnaamij saacadle ah.
Muuqaallada muuqaalka ah.
Waxa jira in ka badan 400 podcasts oo laga dooran karo gudaha Edge ee maktabadaha Shabakadda.
Sparks waa mid soo jiidasho leh, xog ogaal ah, oo inta badan kaftan badan. Had iyo jeer waa goyn.
Martigeliyaha wuxuu martiqaadayaa marti ganacsi oo heer sare ah si uu ugu biiro isaga wada xaajoodyada ku lug leh suuqgeynta nuxurka, raadinta caalamiga ah ee Google, warbaahinta bulshada, qalabka xisaabinta, iyo SERP.
#2. Podcast School Suuqgeynta
Waxaa martigeliyay Neil Patel iyo Eric Siu - oo laga heli karo iTunes, Spotify, SoundCloud, YouTube, iyo Stitcher.
La soo saaro dhowr jeer toddobaad kasta, Iskuulka Suuqgeynta waxay diiradda saartaa suuqgeynta dhijitaalka ah, laakiin SEO waa ujeedada ugu weyn ee shanta illaa tobanka daqiiqo ee podcasts.
Waxa jira in ka badan 1900 podcasts oo diyaar u ah dhegeysigaaga iyo raaxaysigaaga daawashada.
Patel waa aasaasaha shirkadaha sida Quicksprout iyo Kissmetrics, sidaa darteed waxa uu si weyn u maalgeliyay suuqgeynta dhijitaalka ah.
Websaydhkiisa, Ubersuggest waa dhammaan waxyaabaha SEO iyo ereyada muhiimka ah. Nasiib wanaag, waxaa jira xoogaa kaftan ah oo u dhexeeya Patel iyo Siu markay ka wada hadlayaan dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay wararka SEO ugu muhiimsan.
Siu waxay keenaysaa xaqiiqo dheeraad ah mawduuca. Wuxuu had iyo jeer ku daraa macluumaadka mulkiilayaasha shabakadaha cusub iyo kuwa ku jiray muujinta dhijitaalka ah sanado badan.
Qaado xoogaa qoraal ah si aad uga faa'iidaysato podcast kasta (marka laga reebo calaamadaynta qaybta). Waa inaadan wadin oo qorin ama aadan qorin, laakiin waxaad isticmaali kartaa app-kaaga xusuusta taleefankaaga adigoo nal ah.
Kadibna, waxaad ku maqli doontaa codkaaga xiisaha leh ee leh qorshahaas ama fikradda cusub ee ka dhalatay dhacdada Iskuulka Suuqgeynta.
#3. SEO 101
Waxaa martigeliyay Ross Dunn iyo John Carcutt - oo laga heli karo SoundCloud, Stitcher, iTunes, iyo YouTube.
Asal ahaan qayb ka mid ah WebmasterRadio.FM, SEO 101 si adag ayuu mawduuca ugu garaacayaa laakiin hab saaxiibtinimo leh.
Eeg in ka badan 400 oo qaybood oo podcast ah.
Dunn iyo Carcutt waxay la shaqeynayeen SEO ku dhawaad ​​​​25 sano. Aqoontooda la isku daray waxay sahlaysaa in la dhageysto qaabka waxayna ilaalinayaan qaybaha fure u ah SEO.
Uma baahnid inaad khabiir ku tahay inaad dhegaysato oo aad wax barato. Waxay si isdaba joog ah u ballanqaadayaan inay wax ka baraan SEO laga bilaabo sagxadda hoose ilaa saqafka sare, xitaa sida xeerarku si joogto ah u beddelaan.
Sababtoo ah Google waa mid culus oo SEO ah, bandhiga waxaa ku jira cusboonaysiinta iyo macluumaadka isbeddelka ee ku saabsan isbeddelada algorithm ee Google ee ugu dambeeyay iyo cusbooneysiinta.
Podcast-ka toddobaadlaha ah waxaa ku jira khabiiro warshadeed sida Google's John Mueller, Metamend's Richard Zwicky, iyo kuwa kale oo badan.
Xasuusnoow in qaybaha la keydin karo si loola wadaago asxaabta. Kadib, mawduuca wuxuu keeni karaa dood firfircoon oo dhexmarta xubnaha kooxdaada.
#4. Raadi News Waxaad isticmaali kartaa
Waxaa marti galisay Marie Haynes - oo laga heli karo Notes Dhegeysiga, iTunes, iyo YouTube.
La soo saaro toddobaadle, Raadi News Waxaad isticmaali kartaa waa muuqaal isbedelaya oo ah fikradaha SEO oo lagu soo bandhigay qaybo 45-daqiiqo ah.
Waxaad ka heli doontaa ku dhawaad ​​200 podcasts si aad u cusboonaysiiso aqoontaada SEO.
Marie Haynes waxay inta badan qaybaheeda ku kharash garaysaa Google-ka iyo bey'addooda isbeddelaysa.
Sida mashiinka raadinta adduunka ugu sarreeya, isku-habaynta mareegahaaga iyo dhaqamada SEO ee ilmaha weyn ee xannibaadda ayaa macno samaynaya.
Bandhigyada Haynes waxay inta badan ku jiraan martida oo waxay ku dhufteen mawduucyo gaar ah sida filashooyinka algorithm, isbeddellada darajada, iyo darajooyinka goobta CMS.
Xirfadlayaasha cusub ee SEO, mawduucyadu waxay noqon karaan kuwo cabsi gelinaya, laakiin Marie ayaa si taxadar leh u sharaxday si aan dhammaanteen u raacno macquulnimada iyo natiijooyinka weyn ee imanaya.
Qaybaha podcast-ka qaarkood ayaa laga yaabaa inay bixiyaan mawduucyo laga yaabo inaadan xiisaynaynin ama diyaar u ahayn inaad hirgeliso, markaa ha ka baqin inaad ka boodo qaybaha ama dhammaan qaybaha.
#5. Ka raadi Podcast-ka Diiwaanka
Waxaa martigeliyay John Mueller, Martin Splitt, iyo Gary Illyes - oo laga heli karo Apple, Google, Spotify, Stitcher, Overcast, iHeartRadio, iyo YouTube.
In ka badan 40 qaybood ayaa diyaar ah.
Haddii aad rabto inaad hoos ugu dhaadhacdo nitty-gritty Google SEO, tani waa meesha.
Oo maadaama ay martigaliyayaasha yihiin Google Webmasters, talada iyo siraha waa wargelin, sax ah, oo inta badan la yaab leh.
Martigaliyayaasha waa u fududahay dhegta, ku raaxaystaan ​​inay uga sheekeeyaan sheekooyin ku saabsan nolol maalmeedkooda Google, oo la wadaag waxa ka socda adduunka SEO oo leh aragti aadan meel kale ka heli karin.
Qaybta ugu fiican ayaa ah in la ogaado in martigeliyayaashani ay yaqaanaan SEO, waxayna yaqaanaan fikirka ka dambeeya isbeddelada kuwaas oo si weyn u saameeyay milkiilayaasha bogagga labaatankii sano ee la soo dhaafay.
Taladoodu waa waxqabad iyo waxqabad. Marka la fahmo, maamulayaasha shabakadu waxay ku habboonaan karaan ereygooda muhiimka ah iyo habka raadinta ee kaliya waxa Google uu raadinayo isbeddel kasta oo soo socda.
#6. Recipe-ka Guusha SEO
Waxaa marti galisay Kate Toon - oo laga heli karo iTunes, Stitcher, YouTube, SunCloud, iyo Spotify.
Dhacdooyin cusub oo ah Recipe-ka Guusha SEO u muuqdaan si aan kala sooc lahayn, laakiin qiyaastii bil kasta, oo socodsii 30-40 daqiiqo.
Waxaa jira 28 fiidiyow oo la heli karo.
Kate Toon waxay isu haysataa inay tahay ganacsi-ganacsade aan habboonayn, waxayna ula jeeddaa hab-dhaqannada ganacsiga erayo fudud.
Podcasts-keeda waxaa loogu talagalay milkiilayaasha ganacsiyada yaryar iyo kuwa maamula goobaha ganacsiga e-commerce iyo blogyada. Qiyaas ahaan la turjumay, taasi waxay ka dhigan tahay kuwa aan weli khabiiro ahayn.
Gaar ahaan, Kate wuxuu jebiyaa SEO In yar oo qaniinyo qaniinyo ah, dhammaanteen waan dheefsan karnaa inta aan ka hirgelineyno shabakadahayada.
Martida waxaa ka mid ah waraysiyada khabiirada SEO, iyo podcast kasta waxaa si cad loogu xusay sida Newbie ama Techie, si aad u bilaabi karto waxyaabaha fudud oo aad ku korin karto barnaamijka.
Laba ka mid ah dhacdooyinkeedii ugu dambeeyay waxaa ka mid ah Ka faa'iidaysiga Awooda Google Search Console iyo La socoshada Cilmi-baarista Keyword-ka.
Haddii aad ku cusub tahay SEO, labadaas podcast waxay u badan tahay inay beddelaan fikirkaaga guusha mustaqbalka ee shabakada.
Hadda oo aan soo bandhignay qaar ka mid ah dhinacyada muhiimka ah ee hirgelinta SEO oo aan faahfaahin ka bixinnay sawirada SEO ee ugu fiican, waxaad ka dooran kartaa oo ka dooran kartaa liiskayaga oo aad ka heli kartaa tartankaaga.
Ha ka baqin inaad siiso taladooda ugu fiican isku day, haddii ay ka timid qoraaga Iibinta ugu Wanaagsan ee Neil Patel at Iskuulka Suuqgeynta Podcast ama si toos ah uga socota maamulayaasha mareegaha Google ee Ka Raadi Diiwaanka Podcast
Dhammaan podcast-yada halkan ayaa kuu rogi doona maamulaha SEO-ga ee xog-ogaal ah oo aad u baahan tahay inaad noqoto.
Haddii aad rabto inaad noqoto khabiir SEO ah, ha ka baqin inaad tan ku darto Ebook Hagaajinta Matoorka Raadinta akhrintaada.
SEO waa qaybta ugu muhiimsan ee ilaalinta makiinadaha raadinta si sax ah u ogaanshaha boggaaga iyo waxa ay bixiso.
Waa maxay Himilada Brand iyo sidee ayay kugu caawinaysaa inaad gaadho hadafyadaada?
Qodobbada Muhiimka ah ee Qoraalka Aragtida Summada Tusaalooyinka ugu Wanaagsan